दशैं काल बनेर आयो समीक्षाको ! परिवारमा चल्यो रुवाबासी – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दशैं काल बनेर आयो समीक्षाको ! परिवारमा चल्यो रुवाबासी
बिराटनगर । मोरङको बेलबारीमा स्कुटर दुर्घटनामा हुँदा एक युवतीले ज्यान गुमाएकी छिन् । भर्खरका तीन जना युवती सवार भएर गै रहेको अवस्थामा उक्त स्कूटर दुर्घटना भएको बताइको छ । ज्यान जाने र घाइने तीन जना युवतीहरु २० बर्ष मुनिका छन् ।
प्रहरीका अनुसार सवार तीन मध्ये, दुई युवती घाइते छन् भने एक युवतीको ज्यान गएको छ । बेलबारी नगरपालिका–४ मा बुधबार राति भएको दुर्घटनामा चालक १९ वर्षीया समीक्षा राईको ज्यान गएको हो ।
दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा आज बिहान १ बजेतिर ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ । को ३२ प ५६३७ नम्बरको स्कुटर आफैँ अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा स्कुटरको पछाडि बसेका १८ वर्षीया अनुपमा राई र १६ वर्षीया सुमित्रा राई घाइते भएका छन् । अनुपमाको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र सुमित्राको स्थानीय सुकुना सामुदायिक अस्पताल विराटचोकमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
२ घण्टामा कामबाट निकालिए, सात महिनादेखि अलपत्र
जु’वा खा’लमा पैसा उ’ठा’उदै गरेको अवस्थामा भेटिएका प्रहरी जवानलाई उन्मुक्ति !